Posted by Tranquillus | Jan 6, 2018 | Kobcin xirfadeed
Dhammaanteen waxaan leenahay xirfado, sifooyin shakhsi ah iyo xataa dabiici ah! Laakiinse kuweennaba runta ma ka dhigan tahay? Ma ogtahay? Sidee loo isticmaalaa si guul leh? Baro sida loola shaqeeyo xirfadahaaga iyo inaad udiyaariso wakhti aad ku gaarto hadafyadaada.
Waxaad waqti ku qaadataa barashada ilaa caruurnimada; Horumarinta aqoonta, sida-ogaanshaha-sida goobo kala duwan, laakiin maxay tahay in hooyada Nature ay kuu soo bandhigtay? Maxaad ku leedahay gudaha qoto dheer?
Ka dhig tusaale ahaan: inaad rabto inaad jidka u hesho mashruuca xirfadeed ee mustaqbalka, xaaladdan, waxaad ku qasbanaan doontaa inaad labalaabiso dadaalkaaga oo laga yaabo in dhammaadku kugu haboonayn. Oo haddaynu halkan ka helno talooyinkaaga oo dhan? Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad qaadato jidka kale, ee ah guusha! Sidaa darteed waxaad hubaal ahaan lahayd inaad lumisay wakhti yar markaad qaadanayso safka labaad.
Fiidiyooga dhiirigeliya 2 min! Waxay ku siin doontaa xeeladaha muhiimka ah si loo horumariyo tayadaada.
Fiidiyowkani waxaad ka heli doontaa talooyin iyo talooyin kuwaas oo kuu oggolaanaya in aad ka faa'iidaysato xirfadahaaga intaad kudiyaarineyso wakhtiga ..., iyo wax kasta, ee kaliya ee 5 tilmaamaya:
1) Awoodahaaga : waxaad leedahay iyaga, aqoonsi!
2) Qiimaynta : haddii aadan muujin kartidaada, qofna kuu sameyn maayo!
3) Aaggaheer sare : horumarinta xirfadahaaga si aad u sameyso shaqo!
4) Focus : Feejignaanta ayaa kordhin doonta xirfadahaaga.
5) Ka khayr badan naftiisa : Tani waa wax aan la dafiri karin, naftaada ku hareeraysan, waxaan had iyo jeer ka baranaa sida ugu fiican.
Diyaar ma u tahay inaad korto oo aad la wadaagto tayadaada kuwa ku hareereysan?
READ Barashada wax barashada
Maxay Tahay Inaad Muujiso Awoodahayaga? May 12th, 2018Tranquillus
horeKa Baxsashada Cabsida Qofka-Ka Cabso sida Calaamadda Tallaabada
socdaExcel Tips First Part-Doping Your Productivity